Mpamorona VS. Mpanjifa: ny adinao isan'andro dia fehezina ao anatin'ny 1 minitra | Famoronana an-tserasera
Mpamorona VS. Mpanjifa: Voafintina ao anaty 1 minitra ny adinao isan'andro
Isika rehetra dia mety hahafantatra amin'ny fomba mamaritra amin'ny an-tsipiriany ny olana manjo ny mpamorona sary isan'andro. Na tiantsika na tsy tiantsika, ny asantsika dia manana singa iray foto-kevitra zava-dehibe ary ny habetsaky ny fahafaha-manao azo atao dia tsy manadino, toy ny mitarika antsika amin'ny adihevitra mandrakizay miaraka amin'ny mpanjifantsika, na amin'ny tenantsika aza. Na dia misy aza ny fironana, ny fitsipika na ny fitsipika mifangaro, dia miovaova izy rehetra ary miankina amin'ny fomba fitantanana azy, eny fa na ny fandikana izany aza dia mety hiteraka vokatra tsara.
Ny fehin-kevitra dia hoe mety ho lasa somary mifandraika tanteraka ny zava-drehetra ary raha ampiantsika io fametahana tsy tapaka ataon'ny mpanjifa io na ny fitsabatsabahan'izy ireo amin'ny asanay dia mety ho sarotra ny raharaha. Ny hevitry ny mpanjifa dia tsy hihoatra noho izany, hevitra tokony horaisintsika, fa tsy zavatra mitarika ny asantsika satria raha izany ... Inona no mety ho dikan'ny asantsika? Na izany aza, ity dia mety ho loharanom-pahafaham-baraka tsara ary manome antsika ny sasany amin'ireo kilalao mahafinaritra indrindra. Ohatra iray ny horonantsary izay itondrako anao anio, izay mahavita misolo tena ny ady isan'andro ataon'ny mpamorona sary miaraka amin'ny mpanjifany ao anatin'ny iray minitra. Fampisehoana an-tsehatra tsotra nefa koa mahery vaika sy asidra izay azo antoka fa hihomehezana anao mihoatra ny iray. Ary izany ve rehefa mahita an'io karazan-javatra io isika dia mieritreritra ... Tena henjana tokoa ny fiainan'ny mpamorona!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpamorona VS. Mpanjifa: Voafintina ao anaty 1 minitra ny adinao isan'andro